Dowladda Mareykanka oo soo dhaweysay heshiiska Dowladda dhexe iyo Ahlu sunna. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR GALMUDUG Dowladda Mareykanka oo soo dhaweysay heshiiska Dowladda dhexe iyo Ahlu sunna.
Dowladda Mareykanka oo soo dhaweysay heshiiska Dowladda dhexe iyo Ahlu sunna.
Previous articleHogaanka Ahlu sunna oo soo dhoweeyay heshiiska laga gaaray dhismaha Galmudug.
Next articleShirka Wakaaladaha Wararka dalalka Islaamka oo ka furmay Jiddah.